Wabiga Shabeelle oo ku fatahay tuulooyin hor leh oo hoostaga Degmooyinka Jowhar iyo Mahadaay
Muqdisho:-Tuulooyinka Buur-fuule, Oobaale, Diinlaaw, Timire hurawa, Kaluundi iyo kuwa kale ayaa waxaa lasoo sheegayaa inay gaareen Fatahaada wabiga Shabeelle oo maalmahii lasoo dhaafay ku fatahay deegaano hoostaga Degmada mahadaay.
Biyaha yaa gaaray ilaa iyo kun hegtar oo xiligaan dalagyo kala duwan ay ku beernaayeen waxaana dhammaan ay biyaha xaalufiyeen waxyaabihii ku beernaa.
Cabdullaahi Yuusuf Xuseen oo ah Gudoomiyaha Tuulada Buurfuule oo kamid ah tuulooyinka hoostaga Degmada Mahadaay ee Gobalka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in xilgaan Tuuladiisa ay ubaahantahay in la magacaabiyo guddiga sidii biyaha wabiga loola tacaali lahaa waxaana sidoo kale uu sheegay in xitaa aysan heysan jawaano lagu caro tuuro biyaha si loo celiyo.
“Waxaan ku dadaaleynaa sidi aan u celi laheyd Biyaha mana heysano wax jawaano ah oo aan Biyaha nku Celino sidaa daraadeed waxaan iska kaashaneynaa la tacaalidooda “Sidaas ayuu yiri Cabdullaahi Yuusuf Xuseen.
Dhinaca kale Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Gobaleedka Hirshabeelle Cali Xaji Isgoowe ayaa sheegay inay ka awood badatay fatahaada dadka ku nool Jowhar iyo Mahadaay islamarkaana ay halis ku jiraan loona baahanyahay in Dowlada Dhexe ee dalka ay ka garabsiiso sidii looga hortagi lahaa qasaaro ka dhaso wabiga shabeelle uu geesanayo.